Meziwanye SEO gị, Gụọ Banyere Ọdịnaya Nyocha! - Ọkachamara Semalt
SEO na ihuenyo kachasị mma bụ nzọụkwụ abụọ bụ isi nke mkpọsa SEO dị irè. The engine search s nwere ọgụgụ isi ma dị mfe na oge, na usoro nke ị nweta ogo search ogo bụ nnọọ sophisticated. Inye ogo ọdịnaya ezughị oke ka ị ga-ege ntị n'ọtụtụ ihe. Ihe dịgasị iche iche na - enye aka n'igosi na njikwa search engine, na ihe kachasị mkpa bụ ụzọ ị na - ebuli ihe oyiyi gị maka SEO.
Ọ bụrụ na SEO dị na ogidi nke ebe nrụọrụ weebụ gị, njikarịcha oyiyi bụ mgbidi ụlọ ahụ. Jason Adler, Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, na-ekwu na foto ndị ahụ bụ ihe dị ike nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma dị mma karịa isiokwu otu puku okwu. Ọ dị mkpa iji ihe oyiyi ahụ mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka ha wee nwee ike izipụ ozi gị na mbido mbụ.
Jide n'aka na ihe oyiyi ị na-ahọrọ dị mkpa na ọdịnaya weebụ gị. Ọtụtụ ihe oyiyi ndị na-adịghị mkpa ga-enye gị dịka nsonaazụ SEO dị mma dịka otu ihe oyiyi na ihe dị mkpa gbasara ederede na nkọwa.
Mmetụta ndị dị elu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ichepụta ihe oyiyi gị. Ha na-enyere ihe oyiyi gị aka igosi search engine results na melite oge nlele nke saịtị gị. All engines ọchụchọ na-adabere na ederede nke ihe oyiyi gị ka ha na-enweghị ike ịgụ ọdịnaya gị, ya mere, ihe ederede elu na mkpado dị elu ga-ekpebi otú ị ga-esi nweta foto gị na nchịkọta foto nke Google..Otu n'ime omume kachasị mma maka mkpado elu bụ ka mkpado mkpirisi dị mkpirikpi, nkọwa na isi.
Nha foto na nchịkọta:
Ogo nke foto na-arụ ọrụ dị mkpa iji meziwanye ahụmịhe njirimara. Jide n'aka na ihe oyiyi ị na-eji adịghị oke arọ iji mụbaa ọsọ ọsọ gị. Jiri obere ma mara mma foto ndị dị mfe igosi na nsonaazụ ọchụchọ. Anyị na-akwado gị ka ị jiri ihe oyiyi na bytes. Ngwaọrụ dị ka Yahoo Smushit nwere ike iji kpochapụ octets site na foto ahụ, mee ka ha dị mfe karịa nke mbụ.
Bochum foto bụ ihe ọzọ dị mkpa mgbe ọ na-abịa n'ịmepụta okporo ụzọ ndị ọzọ site na nchọta foto nke Google. Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ na-enye ihe dị mkpa karị na foto ndị ejirila na-elekọta otu ngalaba karịa ihe oyiyi ejirila na otutu ngalaba. Otu algorithm bụ isi maka ọchụchọ oyiyi Google bụ nchịkọta ihe oyiyi na ederede nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
Dịka otu isiokwu dị mkpa na URL gị, ntinye aha dị mkpa maka foto gị. Ndekọ aha bara uru bara uru na-enyere ndị ọrụ ọchụchọ aka inyocha saịtị gị n'ụzọ ka mma. I kwesịghị iji aha faịlụ ndabara, dịka DSC0119.jpg, n'ihi na ha anaghị enye nkọwa zuru ezu gbasara foto gị. Kama nke ahụ, ị ​​ga-eji nchịkọta aha na mkpụrụokwu akọwapụta, nke a ga-ekewapụ iche site na hyphens.
Njikọ foto na mkpado aha:
Ihe oyiyi bụ ihe na-adọrọ mmasị ma na-ahụ anya nke na-akọwa saịtị gị na ọdịnaya ya. Njikọ oyiyi kwesịrị ekwesị bụ ihe SEO kwesịrị ime. Ị ga-ezere ịjikọ foto gị ozugbo. Kama nke ahụ, ị ​​ga-etinye foto ahụ ma nweta njikọ azụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọzọkwa, ị ga-eji mkpado aha kwesịrị ekwesị. Ihe mkpado aha na-enye ozi banyere ọdịnaya gị mgbe ndị ọrụ na-ekpocha ọbụbụ ọnụ ha. Ọ dị mkpa ịtinye SEO nkọwa enyi na nkọwa dị mkpa na mkpado aha gị.